Archive du 20170724
Tsapan-kevitra Fifidianana 2018 Ravalomanana 58 %, Rajoelina 16%
Mandeha ny tsapan-kevitra isan-karazany amin'ny mety ho vokatry ny fifidianana 2018 na dia mbola misy herintaona mahery kely aza.
Belambo-Toamasina Ahiana ny hisian’ny sakoroka goavana
Taorian’ny fitsarana ady madio izay namoahan’ity fitsarana ity ny didy manafoana ny famoivarotana teo amin’ny tompon-tany, sy ity ramatoa mpandraharaha ara-barotra isan’ny fantan-daza eto Toamasina,
Claudine Razaimamonjy Natao fanadihadiana indray
Re fa nandalo teny amin’ny Chaîne Pénale Anti-corruption na ny fitsarana manokana misahana ny ady amin’ny kolikoly teny 67 Ha ny herinandro lasa teo Rtoa Claudine Razaimamonjy ary natao fanadihadiana.
Alain Ramaroson sy Jean Nirina Ho afa-bela sa hilentika ?
Hitodika etsy amin'ny fitsarana Anosy ny mason'ny rehetra rahampitso talata 25 jolay.
Imamba Soavimasoandro Tany hambolen’ny tantsaha 11 ha no nisy namefy
Miaina anaty tebiteby tanteraka ireo tantsaha mpamokatra ao anatin’ny fokontany Imamba Soavimasoandro amin’izao fotoana. Taorian’ny fetin’ny 26 jona lasa teo,
Ady amin’ny hain-tany Handray anjara amin’ny COP 13 isika
Handray anjara amin’ny kaonferansa goavambe momba ny hain-tany sy ireo mahatonga izany (COP 13) izay hatao any Ordos, Sina, i Madagasikara, ny 4 hatramin’ny 16 septambra ho avy izao.
Zaza tsy ampy taona miasa Maherin’ny 2 tapitrisa
Araka ny tarehimarika navoakan’ny avy eo anivon’ny birao iraisam-pirenena momba ny asa (BIT) dia maherin’ny 2 tapitrisa amin’izao fotoana izao ireo zaza tsy ampy taona miasa eto amintsika.
Fjkm Ambatondrazaka Fitiavana Noraisin-tanana ny mpitandrina vaovao
Zoma 21 jolay sy ny alahady 23 jolay no natokana ny mpino Kristianina eo anivon’ny Fjkm Ambatondrazaka Fitiavana nandraisan-tanana ny
Fifaninanana Esport Tontosa ny fifantenana nasionaly
Tontosa tetsy amin’ny Alliance Française Andavamamba ny sabotsy teo ny fifantenana nasionaly ho an’ireo afaka hanohy ny fifaninanana Esport
Sambany teo amin'ny tantaran'i Madagasikara ny hoe ny filoha Malagasy no filohan'ny Frankofonia. Amin'ny lafiny iray dia mety ho voninahitra saingy raha dinihina amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena sy araka ny fijerin'ny
Faritra Itasy Hikarakara fihaonambe ara-toekarena
Anisan’ny faritra iray manankarena ny faritra Itasy. Betsaka ireo karazam-bokatra mampalaza azy toy ny trondron-dranomamy, ny voatabia sy anana ary ny papay.
Tangorona 2017 Nihendanja ny maha tsenabe azy
Vitsy ny fampandraisana anjara ny olona eny ifotony tamin’ny tsenabe Tangorona 2017.
Soaniedanana PK 67 Lasa tsenabe isaky ny zoma
Na mbola any am-ponja miandry ny didim-pitsarana mahakasika azy ny 25 aogositra ho avy izao aza ny filoha nasionalin’ny fikambanana HAFARI Malagasy Rafanomezantsoa Jean Nirina dia miroborobo hatrany ny tetikasan’ny fikambanana,